141CM AXB Doll Mid Naasaha Dhexta Maqaarka Caatada Leslie Nature Maqaarka
Caruusadaha qaabka yurubiyanka ah,C cup caruusadaha galmada,Caruusadaha galmada caato ah
Madaxa xorta ah: *
Qurxinta-Qurxinta ($ + 120)
Kuleylka caqliga: *
Haa (+ $ 60)
Codka Sirdoonka: *
Baahan (+ $ 60)
Gawaarida (+ $ 0)
Sheekada taariikhda Leslie:
Qurxiyo jilid bilaash ahwaqti xaddidan, Taariikh 2021/07/01 - 2021/07/15.
Leslie waa caruusad jinsiyeed TPE ah oo dhererkeedu yahay 141cm. Halkaas, waxaan ku dhacay sariirta waxaanan u sheegay inta aan u baahanahay ee aan doonayo. Markii aan dareemay in guskiisa ugu dambayntii lagu riixay jidhkayga, waxaan bilaabay inaan imaado. Casiirkeenu waa mid qoyan oo sibiibix ah. James wuu soo bixiyay oo wuxuu gashaday kondhom si uu u yimaado. Waxaan u sheegay inuu dhaqsado, aad baan ugu baahanahay.
❤ Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo xulashooyin ah AXB caruusadaha cabirro iyo qaabab kala duwan.
brand: AXB caruusadaha
Dhererka ： 141cm